Ụbọchị My Pet » Akpa a Nta Nwanyị na 5 Easy Nzọụkwụ
“Ana m achọ a tọrọ nwaanyị ma na ọtụtụ ndị inyom na-achọ na-akpa onye gburugburu ha onwe ha afọ. Kedu ihe m nwere ike ịme?” – Ncheta
Taa ajụjụ bụ site na otu nke anyị na-agụ ndị chọrọ ịnọ na-amaghị aha; anyị ga-akpọ ya Bill. Gụọ ihe ndị na ajụjụ ọzọ. Rịba ama otú Bill ama kwenyesiri ike na ndị na-eto nwaanyị ọ na-achọ ga-agaghị enwe mmasị n'ebe onye na afọ ndụ ya. Nke a bụ onwe imezu kweere nke a na-fọrọ nke nta na-ekwe nkwa na-abịa ezi. Ọ bụrụ na ị kwere miri ala na ị na-aga ghara, mgbe ahụ, ị ​​ga-.
The ezigbo azịza.
Na mpempe, ee, ị nwere ike nnọọ chọta a tọrọ nwaanyị nke ahụ dị mma ka ị. Ị dị nnọọ mkpa ka gị lekwasịrị, -eme, na-anọ na-N'ezie.
Olee otú ị pụrụ ina malitere na ziri ezi?
Mbụ, na-a anya miri ala n'ime ma chepụta kpọmkwem ihe mere na ị chọrọ izute a tọrọ nwaanyị. Na-eche banyere ihe a zuru okè nwaanyị ga-adị ka. Kọwaa ya dị ka ọtụtụ ihe-nkọwa dị ka ị ga-ekwe omume nwere ike. Mgbe ahụ, dee ya ala na a mpempe akwụkwọ. Dee ya afọ, ọdịdị ahụ, àgwà, ntụrụndụ, -amasị ya na-adịghị amasị ya, wdg. Ozugbo gị kwuru ahụ zuru okè nwaanyị n'ihi na ị na oké zuru ezu, n'ogige atụrụ elu na mpempe akwụkwọ na-ebu ya na gị maka 1 izu.
Were ya na ị na-ama ya. Kedu ihe ị ga-eme? Gịnị ka ị ga-ekwu okwu banyere? Olee ebe ị ga-aga? N'ezie-eche na ọ na-esi n'ime mmetụta nke ya — Olee otú ị ga na-eche mgbe gị na ya? Ihe a nile pụrụ iyi ihe na-enweghị isi, Ma, ị maara na nanị site ede ihe ị chọrọ, ị dịkwuo gị inweta ya site 80%!
Chegodị echiche banyere na otu maka nkeji…
“The ịdọ aka ná ntị nke na-ede ihe ala bụ nzọụkwụ mbụ na n'ebe-eme ka ọ eme eme.”
Social stigmas gịnị mere na ị na-elekọta?
Ị gaghị. Anyị na otu jupụtara na-elekọta mmadụ stigmas. Anyị na-arụsi nnọọ ọrụ ike ịbụ nchegbu banyere “ihe ndị ọzọ ga na-eche” na anyị na anyị na-atụ ụjọ na-achụso anyị onwe anyị na nrọ. Ee, ọtụtụ ndị hụrụ n'anya na-ikpe na ndị ọzọ, ma, ọ bụ ha na-ahọrọ na nri ha. Gịnị mere ha na-eme ọ bụ a ibu isiokwu ụbọchị ọzọ, ma ọ bụ n'ezie adịghị mkpa ebe a. Ọ dịghị onye ọzọ nwere ike omume maara ihe bụ ihe ziri ezi n'ihi na ị, n'ihi ya mere ha ntị?
Onye maara ihe na otu mgbe, sị,
“Ihe onye ọzọ na-eche banyere gị bụ onye ọ bụla nke azụmahịa gị”.
Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị inyom na-achọ onye gburugburu ha onwe ha afọ?
Nke a bụ kpam kpam na-abụghị eziokwu! Eziokwu bụ, ọ bụla n'ime anyị nwere dị iche iche pụrụ iche chọrọ na mkpa. Ihe mgbaru ọsọ gị na-alụbeghị di na-elekwasị anya kwesịrị ịchọta zuru okè nwaanyị n'ihi na ị. Oge.
5 mfe Atụmatụ maka adọta na-akpa ụmụ agbọghọ.
Nta inyom na-dọtara àgwà dị ka okè (dị ka ha na papa m), ego na elu ọnọdụ mmadụ, masculinity, na-edu ndú ikike, obi ike, na jụụ, ya mere, ọ dị mkpa ka ị na-elekwasị anya na bụla nke ndị a àgwà i nwere.
1) Bụrụ onwe gị.
Mgbe okenye ụmụ okorobịa izute a tọrọ nwaanyị ha na-na-na ụjọ na-amalite na-eme ihe n'ezie weird. Adịghị eme nke a — dị nnọọ bụrụ onwe gị.
2) Mee ka ọ ìhè na fun.
Nwee igwuri egwu. Nwee anụrị. Tiis ya. Ọ na-echefubeghị ihe ọ dị ka na-egwu na goof gburugburu. Ọ ga-eme gị ụfọdụ mma icheta bụghị ka ọ were ndụ kpọrọ. -Ntakịrị crazy na na-ahọrọ ihe ndị na-tọrọ ụmụ okorobịa n'ozuzu ike imeli ime. Gaba n'ihu. Onwe gị obi ụtọ.
3) Ịbụ onye ndú. Ịbụ onye.
Nta inyom na-yikarịrị achọ onye na-edu ndú. Ha nwere abubara ahụmahụ ná ndụ ma na-yikarịrị achọ onye na-egosi ha ihe bụ ihe si n'ebe. Mee ka gị na ụbọchị na ndị ọzọ na atụmatụ n'ihu nke oge, ma na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ ma na-arịọ ya echiche nke atụmatụ na ị ugbua mere. (Ọ nwere ike ịbụ nfụkasị sushi). Otu nwoke, ma na-akwanyere ya na uche. Emepe ụzọ, na-eje ije na mpụga nke Ewepụ Ihe Mgbochi, na Anam Udeme si oche bụ ụzọ ọzọ na-eme ka a nnukwu echiche na-emeso ụmụ agbọghọ.
4) Adịghị eme ka a “perv”.
Kasị mma na-eto eto ndị inyom a kụrụ na site na ụfọdụ ngwọrọ, Ẹyụrọde okenye Ihọd. Anwala ime kwa anya ma ọ bụ na ga-eche na ị bụ naanị a “perv” na-achọ ga-esi n'ime ya ogologo ọkpa. Mgbe gị na naanị ọnụ, ọ bụ OK ka flirt, ma ka ya na-achụso gị maka ihe ọzọ. Ma i nwere ike mmenyenjo ya pụọ.
5) Nye ya ụfọdụ ohere.
Nta inyom na eleghị anya dị nnọọ enwetatụbeghị ha nne na nna ụlọ nnọọ ahaziri ndụ na efu nnwere onwe. Ọ bụrụ na ọ na-agbara gị, ọ bụghị n'ihi na ị re-eke kubie ume na gburugburu ebe obibi na ọ hapụrụ… ọ bụ n'ihi na ị na-anọchite anya ihe dị iche iche. Nye ya ụfọdụ ohere. Ịbụ onye na-enye mgbe nile rọrọ banyere, na mgbe ahụ na-adịghị achụkwa ya. Ka ya na-abịa gị.